Barnaamijka Firmware - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Injineernimada Fumax ayaa ku rari doonta macaamiisha Firmware (badanaa HEX ama BIN FILE) MCU si ay awood ugu yeeshaan alaabtu inay shaqeyso.
Fumax waxay si adag gacanta ugu haysaa barnaamijka firmware
Barnaamijyada IC-da waa in loogu qoro barnaamijka qolka keydka ee gudaha iyadoo la adeegsanayo aaladda barnaamijka, taas oo guud ahaan u qaybsan barnaamijyo qadla'aan ah iyo barnaamijyada internetka.
1. Hababka ugu badan ee barnaamijka
(1) Barnaamij-bixiye Universal
(2) Barnaamij qaade
(3) Barnaamijyada tooska ah Online
2. Noocyada barnaamijka internetka：
(1) Barmaamijka on-line-ka wuxuu adeegsadaa baska isgaarsiinta ee jibiska ah, sida USB, SWD, JTAG, UART, iwm. Istaraatiijku badanaa waa go'an yahay biinana yar ayaa isku xira inta lagu jiro barnaamijka.
(2) Maaddaama xawaaraha isgaarsiinta isgaarsiintu uusan sareyn, fiilada guud waxaa loo isticmaali karaa duubis iyada oo aan la isticmaalin awood sare.
(3) Maaddaama gubashada qadka lagu diyaarinayo isku xirka siligga, haddii qalad la helo inta lagu guda jiro baaritaanka wax soo saarka, PCBA khaldan ayaa la raadsan karaa dibna loo gubi karaa iyada oo aan la kala goynin qarka. Tani kaliya ma badbaadinayso kharashyada wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxay hagaajineysaa waxtarka barnaamijka.
3. Waa maxay barnaamij?
BARNAAMIJKA, sidoo kale loo yaqaan qoraa ama wax guba, waxaa loo isticmaalaa in lagu barto barnaamijka IC.
4. Faa'iidada barnaamijka IC
Intabadan IC-da hore, kuma wada jiraan isticmaal caadi ah, laakiin waxay u isticmaalaan si gaar ah, iyagoo ugu yeeraya ID-yada AQOONSIGA.
Markaa haddii nashqadeeyayaashu doonayaan inay dejiyaan guddiga wareegga, waa inay adeegsadaan noocyo kala duwan oo IC ah oo leh hawlo go'an, waxayna u baahan yihiin inay diyaariyaan noocyo kala duwan oo IC ah, gaar ahaan soosaarayaasha waaweyn.
Hadda naqshadeeyaha wuxuu kaliya ubaahanyahay inuu diyaariyo IC si uu ugu gubo IC shaqooyin kaladuwan kadib markii AQOONSADAHA LAGU SAMEEYEY oo la isticmaalay.
Diyaargarowgu waa ku habboon yahay, laakiin gubi waa in loo diyaariyaa inuu gubo.
Qalabka softiweer: Altium (Protel), PADS, Allegro, Eagle
Barnaamijka: C, C ++, VB